ဘာလို့ တော်တဲ့ မိန်းမတွေက ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်တွေကို လက်ထပ်မိကြတာလဲ – Gentleman Magazine
ဘာလို့ တော်တဲ့ မိန်းမတွေက ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်တွေကို လက်ထပ်မိကြတာလဲ
သင့်ရဲ့ ခင်ဖို့အကောင်းဆုံး အယဉ်ကျေးဆုံး မိန်းကလေးသူငယ်ချင်း ရည်ရည်မွန်မွန်လေးက ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်တစ်ကောင်နဲ့ လက်ထပ်သွားတာ ကြုံဖူးကြပါသလား။ တချို့စုံတွဲတွေကလဲ သင် ကိုယ့်နဖူးကိုယ် ပြန်ရိုက်ပြီး ” ဘာလို့ ဒီကောင်မလေး ဒီလိုကောင်ကို ပြန်ကြိုက်တာလဲ ” ဆိုပြီး စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လေ့လာသူတွေကတော့ အဲဒိမေးခွန်းကို ကြိုးစား ဖြေပေးထားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
၁. လူဆိုးပုံစံ အတန်းထဲမှာ အမြင်ကပ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်တွေလို လူဆိုးတွေမှာ မိန်းကလေးတွေ စွဲလောက်တဲ့ ပုံဟန်တွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ လူတွေထဲမှာ လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း၊ အမိန့်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်ချက်ပြည့်ဝခြင်း၊ ကိုယ့်ဘာသာ အရမ်း ဂရုစိုက်ခြင်း တို့လိုပါ။ သူမက အဲလိုပုံစံကို စွဲတတ်တာကလဲ ဇီဝဗေဒအရ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက် ယုံကြည်ချက်ပြည့်ဝတာဟာ မျိုးရိုးဗီဇကောင်းပြီး ဥစ္စာ ပြည့်ဝတာတွေဟာ သဘာဝတရားအရ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်လွန်သူတွေ၊ ဆိုက်ကိုဖောက်နေသူတွေ၊ ပါးနပ်စွာ လိမ်လည်တတ်သူတွေဆိုတဲ့ လူမိုက် လက္ခဏာ သုံးမျိုးဟာလဲ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အရမ်းပြီးပြည့်စုံနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ လင်ရှိမိန်းမလဲ လိုက်မှာပဲ။ အထိအခိုက်မခံတဲ့၊ စိတ်ပျော့တဲ့ ကောင်မလေးတွေလဲ လိုက်မှာပဲ။ လူကောင်းတွေ မလိုက်တဲ့ မိန်းမတွေကို သူတို့လိုက်ရဲပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကြောင်ခံတွင်းပျက်နဲ့ ဆက်ရက်တောင်ပံကျိုး တွေ့ဆုံဖို့ အခွင့်အလမ်း အပြည့်ရှိပါတယ်။
၂. ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံနဲ့ ဆွဲဆောင်ခြင်း အဲဒိတော့ သင်ကိုယ်တိုင် လူဆိုးတစ်ယောက် ဖြစ်မလာပဲနဲ့ အဲဒိကောင်တွေလို ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပန်းတိုင်တွေ၊ ဝါသနာတွေအကြောင်း ပြောတတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှုရှိပုံပေါက်ပြီး မိန်းကလေးတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ အားလုံးထဲမှာ သင့်ရဲ့ လခ ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်းကို အော်ကျယ်အော်ကျယ်နဲ့ ကြွားနေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ မဟာ တောင်တက်ခရီးစွန့်စားခန်းတွေကိုလဲ နားမခံသာအောင် ပြောပြနေစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခါအခွင့်ကြုံရင် သင်လုပ်နိုင်တာတွေနဲ့ သင်ပျော်တာတွေကို ပြောပြပေးရုံပါပဲ။ အဲဒါက သင့်ကို အရမ်းမောက်မာပုံလဲ မပေါက်စေပါဘူး။ ပျော်ပျော်နေတတ်တာ၊ တီထွင်ဉာဏ်ရှိတာဟာ သင့်မှာ မျိုးရိုးဗီဇကောင်းတယ်ဆိုတာကို အမျိုးသမီးတွေကို ပြလိုက်တာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် သင် အနုပညာ တစ်ခုခု၊ ဥပမာ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ၊ ဂစ်တာတီးတာမျိုး လုပ်ရင် အဲဒိဝါသနာတွေအကြောင်း စကားစပ်ရင် ပြောပြခြင်းဟာ သင့်ကို ကောင်မလေးတွေ အထင်ကြီးသွားစေပါတယ်။ သင်ထိုင်တဲ့ နေတဲ့ ကိုယ်ဟန်ကလဲ သင်က အပေါင်းအသင်းကြားထဲမှာ ထင်ပေါ်လား၊ မြှုပ်နေလားဆိုတာ ပြနိုင်ပါတယ်။ ထင်ပေါ်သူတွေကို အမျိုးသမီးတွေ စွဲတတ်တာပါပဲ။ ထိုင်နေစဉ်မှာ လက်မောင်းတွေကို ဖြန့်ကားထားပြီး သင့်ဘော်ဒါတွေရဲ့ ပခုံးပေါ် လက်တင်ထားခြင်းဟာ သင့်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်း ပိုရှိစေပါတယ်။
ဘာလို့ တျောတဲ့ မိနျးမတှကေ ခပျဆိုးဆိုးကောငျတှကေို လကျထပျမိကွတာလဲ သငျ့ရဲ့ ခငျဖို့အကောငျးဆုံး အယဉျကြေးဆုံး မိနျးကလေးသူငယျခငျြး ရညျရညျမှနျမှနျလေးက ခပျဆိုးဆိုးကောငျတဈကောငျနဲ့ လကျထပျသှားတာ ကွုံဖူးကွပါသလား။ တခြို့စုံတှဲတှကေလဲ သငျ ကိုယျ့နဖူးကိုယျ ပွနျရိုကျပွီး ” ဘာလို့ ဒီကောငျမလေး ဒီလိုကောငျကို ပွနျကွိုကျတာလဲ ” ဆိုပွီး စဉျးစားစရာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ လလေ့ာသူတှကေတော့ အဲဒိမေးခှနျးကို ကွိုးစား ဖွပေေးထားပါတယျ။ ဖတျကွညျ့ပါ။
၁. လူဆိုးပုံစံ အတနျးထဲမှာ အမွငျကပျစရာကောငျးတဲ့ ကောငျတှလေို လူဆိုးတှမှော မိနျးကလေးတှေ စှဲလောကျတဲ့ ပုံဟနျတှေ ရှိတတျကွပါတယျ။ လူတှထေဲမှာ လှမျးမိုးနိုငျခွငျး၊ အမိနျ့ပေးနိုငျခွငျး၊ ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျခကျြပွညျ့ဝခွငျး၊ ကိုယျ့ဘာသာ အရမျး ဂရုစိုကျခွငျး တို့လိုပါ။ သူမက အဲလိုပုံစံကို စှဲတတျတာကလဲ ဇီဝဗဒေအရ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ယောကျြားတဈယောကျ ယုံကွညျခကျြပွညျ့ဝတာဟာ မြိုးရိုးဗီဇကောငျးပွီး ဥစ်စာ ပွညျ့ဝတာတှဟော သဘာဝတရားအရ ဆှဲဆောငျမှု ရှိနပေါတယျ။ ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျလှနျသူတှေ၊ ဆိုကျကိုဖောကျနသေူတှေ၊ ပါးနပျစှာ လိမျလညျတတျသူတှဆေိုတဲ့ လူမိုကျ လက်ခဏာ သုံးမြိုးဟာလဲ တဈခုနဲ့တဈခု အရမျးပွီးပွညျ့စုံနပေါတယျ။ သူတို့ဟာ လငျရှိမိနျးမလဲ လိုကျမှာပဲ။ အထိအခိုကျမခံတဲ့၊ စိတျပြော့တဲ့ ကောငျမလေးတှလေဲ လိုကျမှာပဲ။ လူကောငျးတှေ မလိုကျတဲ့ မိနျးမတှကေို သူတို့လိုကျရဲပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ကွောငျခံတှငျးပကျြနဲ့ ဆကျရကျတောငျပံကြိုး တှဆေုံ့ဖို့ အခှငျ့အလမျး အပွညျ့ရှိပါတယျ။
၂. ခပျမိုကျမိုကျပုံစံနဲ့ ဆှဲဆောငျခွငျး အဲဒိတော့ သငျကိုယျတိုငျ လူဆိုးတဈယောကျ ဖွဈမလာပဲနဲ့ အဲဒိကောငျတှလေို ဆှဲဆောငျမှုရှိအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ။ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ ပနျးတိုငျတှေ၊ ဝါသနာတှအေကွောငျး ပွောတတျတဲ့ ယောကျြားတှဟော ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျမှုရှိပုံပေါကျပွီး မိနျးကလေးတှကေို ဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျ။ အဲဒါဟာ အားလုံးထဲမှာ သငျ့ရဲ့ လခ ဘယျလောကျကောငျးကွောငျးကို အျောကယျြအျောကယျြနဲ့ ကွှားနဖေို့ မဟုတျပါဘူး။ သငျ့ရဲ့ မဟာ တောငျတကျခရီးစှနျ့စားခနျးတှကေိုလဲ နားမခံသာအောငျ ပွောပွနစေရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အခါအခှငျ့ကွုံရငျ သငျလုပျနိုငျတာတှနေဲ့ သငျပြျောတာတှကေို ပွောပွပေးရုံပါပဲ။ အဲဒါက သငျ့ကို အရမျးမောကျမာပုံလဲ မပေါကျစပေါဘူး။ ပြျောပြျောနတေတျတာ၊ တီထှငျဉာဏျရှိတာဟာ သငျ့မှာ မြိုးရိုးဗီဇကောငျးတယျဆိုတာကို အမြိုးသမီးတှကေို ပွလိုကျတာပါပဲ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျ အနုပညာ တဈခုခု၊ ဥပမာ ဓာတျပုံရိုကျတာ၊ ဂဈတာတီးတာမြိုး လုပျရငျ အဲဒိဝါသနာတှအေကွောငျး စကားစပျရငျ ပွောပွခွငျးဟာ သငျ့ကို ကောငျမလေးတှေ အထငျကွီးသှားစပေါတယျ။ သငျထိုငျတဲ့ နတေဲ့ ကိုယျဟနျကလဲ သငျက အပေါငျးအသငျးကွားထဲမှာ ထငျပျေါလား၊ မွှုပျနလေားဆိုတာ ပွနိုငျပါတယျ။ ထငျပျေါသူတှကေို အမြိုးသမီးတှေ စှဲတတျတာပါပဲ။ ထိုငျနစေဉျမှာ လကျမောငျးတှကေို ဖွနျ့ကားထားပွီး သငျ့ဘျောဒါတှရေဲ့ ပခုံးပျေါ လကျတငျထားခွငျးဟာ သငျ့ကို လှမျးမိုးနိုငျစှမျး ပိုရှိစပေါတယျ။
Previous: ဒုတိယအချစ်က အချစ်ဦးထက် ပိုကောင်းရသည့် အကြောင်းရင်း (၁၀)
Next: မိန်းကလေးများအကြိုက် Perfect Date ဖြစ်စေဖို့